इम्युनिटी पावर बढाउन यस्तो खानालाई प्राथमिकता दिनुस् | Glamour Nepal
Healthy Food Tips Immune Booster Food
मासुको बढी उपभोग हुने दसैँका बेला मासु खाँदा के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला ? मुख्य रुपमा पोलेका, तारेका, रसायन प्रयोग गरी प्रशोधन गरिएका मासुले क्यान्सर रोग हुन सक्ने...
पुदिना अचारको रूपमा भान्सामा प्रयोग गर्नेदेखि लिएर औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। जसरी प्रयोग गरे तापनि यसले शरीरलाई फाइदा नै गर्छ। विशेषगरी, खाना पचाउन या रुचाउन...
यदि तपाईंको यौन प्रति रुची घट्दै छ, छिटो थाक्नु हुन्छ अब भने चिन्ता नलिनुस्, दिनहु एक गिलास अनारको जुस पिउनुस। एक अध्ययनबाट अनारको जुसले यौन क्षमता बढाउने पुष्टि भएको छ।...
तपाइले पहेलो र हरियो रङको केरा त धेरै देख्नु भयो होला। खानु पनि भएको छ । तर तपाईले कहिल्यै रातो रङको केरा खानु भएको छ ? वा देख्नु भएको छ ? अचम्म पर्नु भयो रातो रङको कोरा पनि...
अब तपाईको लागि तनावको दिन सकिएको छ। एक अनुसन्धानमा चामल पकाउने यस्तो नयाँ तरिका पत्ता लगाइएको छ, जसले यसको क्यालोरी कम गर्न सक्छ। श्रीलंकाको द कलेज अफ केमिकल साइन्सका...
दैनिक प्याज खानुस् स्वस्थ रहनुस् । प्याजले पुर्याउने ५ फाईदाहरु
# प्याजले हाम्रो शरिरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई अधिक मात्रामा बढाउने गर्छ। यो खाना अरुची जस्ता सबै समस्याहरुको लागि निकै फाइदा जनक मानिन्छ।यो हरेक प्रकारको तरकारीमा...